Tirada Dadka Ku Dhintay Daadad Kusoo Fatahay Indunusiya Iyo Dhimashada Oo Sii Kordhaysa | Garadag News
Tirada Dadka Ku Dhintay Daadad Kusoo Fatahay Indunusiya Iyo Dhimashada Oo Sii Kordhaysa
Tirada Dadka Ku Dhintay Daadad Ku Dhuftay Indonesia Oo Sii Kordhay Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay
Ugu yaraan 73 qof ayaa ku dhintay in ka badan 60 qofna waa la la`yahay kaddib daadad ku dhuftay gobolka bariga Indonesia ku yaalla ee Papua.Kooxaha badbaadada ayaa dadaal ugu jira sidii ay u gaari lahaayeen dhulalka miyiga ah ee gobolka ka tirsan, waxaana jira cabsi ah in tirade dhimashada ay sii kororto.
Waddooyinka ayaa waxaa jaray daadad iyo dhul go` iyo geedo soo jabay, daadadka ayaa sidoo kale saameeyay buundooyin iyo in ka badan boqol guryo2017: Sanad ay soo baxeen tirooyin lama filaan ah In ka badan 4,000 oo qof ayaa ku qasbanaaday inay guryahooda isaga baxaan, qaarkood ayaana hoy ka dhigtay xafiisyada dowladda.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in roobab xoog leh oo bilowday fiidnimadii Sabtidii uu da`ayay habeenkii oo dhan, kuwaas oo sababay daadad. Dadka ku waxyeeloobay daadadkaas ayaa laga baadigoobayaa magaalada Sentani, oo ka mid ah meelaha ugu daran ee ay daadadku saameeyeen.
Ugu yaraan 51 qof ayaa lagu dilay magaalada, sida uu sheegay Sutopo Purwo Nugroho oo ah afhayeen u hadlay hay`adda ka hortagga musiibooyinka ee dalkaas. Toddoba qof oo kale ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen magaalada Jayapura, sida uu sheegay Mr Nugroho.
Daadadka ayaa badanaa ku dhufta dalka Indonesia, gaar ahaan xilli-roobaadka inta u dhaxeysa October-April. Bishii January, daadad ayaa ugu yaraan 70 qof ku dilay jasiiradda Sulawesi, iyadoo roob xooggan oo ka da`ay West Java bishii March ay ku barakaceen boqollaal qof. Saraakiisha gargaarka degdegga ah ayaa sheegay in bilihii la soo dhaafay ay uga digeen maamulka Papua khatarta daadadka. Gobolka Papua ayaa dhanka bari xad kala leh gobolka madaxa bannaan ee Papua New Guinea